संविधान संशोधन पछि मात्र चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने डा. बाबुराम भट्टराईको धारणा – Himalaya TV
Home » समाचार » संविधान संशोधन पछि मात्र चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने डा. बाबुराम भट्टराईको धारणा
संविधान संशोधन पछि मात्र चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने डा. बाबुराम भट्टराईको धारणा
९ चैत्र २०७३, बुधबार २०:३९
लाहान ९ चैत्र । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले – संविधान संशोधन पछि मात्र चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन ।
सिरहाको लाहानबाट नयाँ शक्ति पार्टीले सुरु गरेको हिमाल, पहाड, तराई–मधेश राष्ट्रिय अभियानको बुधबार उद्घाटन गर्दै भट्टराईले उक्त कुरा बताएका हुन ।
निर्वाचन पहिले कि संविधान संशोधन पहिले भन्ने कुरामा विवाद भइरहेको बेला डा. भट्टराईले भने – ‘अहिले सरकारले संघीयताको मुद्दा र संविधान संशोधनको विषयलाई थाँती राखेर चुनावको कुरा गर्नु भनेको संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दालाई नै विषयान्तर गर्न खोजेको हो ।’
संविधानले कल्पना गरेको संघीय संरचना, प्रदेश, स्थानीय तह, स्वायत्त क्षेत्र, विशेषाधिकार क्षेत्रको सीमांकन भएकै छैन, प्रदेशको सीमांकन हल भएकै छैन, यस्तो अवस्थामा चुनाव पहिले गर्छु भन्नु कसरी सुल्टो बाटो हुन्छ ?’ डा भट्टराईको प्रश्न थियो ।
’अहिले देशलाई तोड्न चाहने र जोड्न चाहने शक्तिहरुबीच संघर्ष चलिरहेकोले नयाँ शक्ति पार्टीले देशलाई जोड्न चाहेको बताउदै डा. भट्टराईले देश जोड्नका लागि सबैलाई समान व्यवहार गरेर सबै जातजाति भाषाभाषीलाई बराबर अधिकार दिनुपर्ने बताए ।
इतिहासदेखि नै देशको निर्माण र रक्षा मधेशी समुदायहरुले नै गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै मधेशी समुदायले विखण्डन होइन बरु देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने लक्ष राख्नुपर्नेमा डा. भट्टराईले दिए । ‘मधेशी समुदायका मान्छेले नेपालको कार्यकारी प्रमुख बन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ र, त्यो अधिकार तपाईंहरुमा छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नयाँ शक्तिका सहसंयोजक रामचन्द्र झाले पञ्चायतकालमा र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि चुनाव भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सबैलाई नसमेटिने चुनावले समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए ।
केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य कलामुद्दीन राइनले मधेशको आन्दोलन कसैको अधिकार खोस्न नभई मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन भएकोले सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
संविधानमा मधेशी जनतालाई अधिकार दिनका लागि कन्जुस्याईं गरिएकोले तराई मधेशमा आन्दोलन उठेको बताउँदै तराई मधेश, आदिवासी जनजातिको समस्या सम्बोधन नगरेसम्म देशले समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गर्न नसक्ने धारणा रामकुमार शर्माको थियो ।
नयाँ शक्ति पार्टीले सिराहको लहानबाट सुरु गरेको हिमाल, पहाड, तराई मधेश जोड्ने राष्ट्रिय एकता अभियान देशका भिभिन्न सहर हुदै चैत्र१३ गते कैलालीको धनगढीमा पुगेर समापन हुनेछ ।